Ogaden News Agency (ONA) – Breaking News: Wakiilkii Ethiopia oo ka baxay shirkii Qaramada Midoway ee Geneva Maxaase Sabab u ah
Breaking News: Wakiilkii Ethiopia oo ka baxay shirkii Qaramada Midoway ee Geneva Maxaase Sabab u ah
Wakiilkii u qaabilsana Gumaysiga Ethiopia inuu uga qeyb galo kulanka Qaramada Midobay ee Qowmiyadaha la xaqiro xuquuqdooda ayaa lagu waramaya inuu ka cadhooday shirkii oo dibada uga baxay.
Woyaanihii Taliska Ethiopia u matalaya fadhigan ayaa aad u cadhooday isaga oo markii horeba nin Woyane ahaa ayaa indhuhu aad u casaadeen oo wajigiisu aad isu badalay isaga oo aad moodo in tacsi uu fadhiyo. markii uu ka warhelay in Afrikan Rights Monitor iyo Mudane Cabdullaahi ay ka socdaan Dhulka Soomalida Ogaden qadiyadaasna ay ka hadleen.
Waxa Kursiga Ethiopia oo saacado badan madhnaa, soo fadhiistay nin kasocda Taliska Ethiopia waxa uuna golaha shirka ka codsaday in laga saaro shirka masuuliyiinta African Rights Monitor iyo haayadaha kale ee kasocda dhulka Ogaden.
Arrintaas oo lagu gacan saydhay. waxaa lagu yiri kulankan sida aad casuumada u haysato ayay iyaguna casuumaada u haystaan. Ururada bulshada xaq ayay u leeyihiin inay kasoo qeyb galaan kana hadlaan xaqiiqda ka jirta dhulkaas.
Ninkii Ethiopa wakiilka u ahaa ayaa arrintaas aad uga cadhooday waxuuna ku hanjabay innuu golaha baneeyn doono hadii aan laga saarin. Isaga oo Diin sidiisa sii guur guuranaya ayuu isku dayay innuu banaanka uga baxo.
Waxaa halkaas wakiilka Ethiopia uu ku beel dareeyay daqiiqado koobnaa oo xaq uu u lahaa innuu ku difaaco taliska macangaga ah ee Ethiopia waxaana ka dhacay daqiiqadihii uu hadli lahaa. Waxaana lagawareejistay cod baahiyihii oo la siiyay qowmiyadihii kale iyo dalalkii kale ee kasoo qayb galay kulankan.
Taliska Ethiopia ayaa goob kasta oo goobaha la isugu yimaado caalamka kala kulanta ceebo iyo fadeexad. Waxaana intaas dheer fadeexada nidaam xumada maamul ee TPLF oo loo arko hadiyo jeer mid aan dowladnimo kamuuqan, balse loo arko mid Jabhadeyn ku dheehantahay.